[Kunze kweZvitsauko 15 kusvika ku17]… Zvakasara zvebhuku iri zvinoodza moyo. Mazana emapeji anogona kupfupikiswa nekungotaura kuti hatigone kufanotaura zviitiko zvisingawanzoitika.
Wee! Ndatenda kunaka handisi ndoga! Iri bhuku rairwadza. Hazvishamise kuti nei vanhu vachikoshesa mablogiki mazuva ano. Handisi kuedza kunyora New York Times bestseller uye handisi kuyedza kufadza weIvy-leaguer. Ndiri kungoedza kutsanangura zvinhu izvi nepese pandinogona kuti ndikwanise kuzvigovana uye iwe ugone kuzvinzwisisa.
Izvo zvakati, ini ndichadzoka uye ndichitora kuraira kwemuongorori uye kuverenga Zvitsauko 15 kusvika 17. Uye pamwe yakanaka nzungu ruomba uye jelly sangweji iri kurongeka! Kana iri yekuongororwa kwenzvimbo yekuverenga, usanyanye kutarisisa ... ndima imwe yakaiswa kubva mutsaurus inogona kukurovera notch. 😉
Chaizvoizvo, maererano nenyanzvi dzekunyora, kuita "zvirinani" kunenge kuri kunyora padanho repasi repasi. Avhareji yekuverenga nyika ino igiredhi rechitanhatu, uye mapepanhau ese akanyorwa padanho iro. Vanyori Vakanaka veKushambadzira Vanyori vanonyorawo padanho rino, kwete padanho repamusoro. Zvinoita kuti kopi yavo ive nyore kuverenga nekunzwisisa, saka inocheka nepakati pemagetsi muhupenyu hwedu, uye nekudaro, zvinonyanya kukurudzira. (Ivo zvakare havati "uye nekudaro.")
Ndanga ndichiverenga zvekare Swan Swan, uye ZVINORWADZA. Ndinoshuva dai iwe wainge watumira iyi bhurogu anenge maganhuro mashanu apfuura uye ukandiponesa kubva pakutambudzwa uku
Ropafadza iwe, Doug, uye mupinduri wako wezvaunotora pane iyo Nhema Swan. Iyo ine mhedzisiro imwechete pandiri se coupla Sekonali - maminetsi gumi nebhuku uye ini ndaenda. Usiku hwekupedzisira ndakaenda kunorara pa10: 8!
Mukomana wako Nassim ndiye wandinoti SAKIA – mbongoro yakangwara inoziva-zvese. Iye zvakare anoenderana nedudziro yangu yekushanda yemhuri yepamusoro- uyo ane dzidzo inopfuura kungwara kwake. Mumwe munhu anoda bitchslap iyi smarmy punk – ichisiya $ 100 matipi emakombi.
Sechinhu chinodzoreredza econ, isu taimbove nezita reBlack Swans. Isu takavadaidza kuti "zviitiko zvekunze", uye vakagara vachirova dzese dzidziso dzakanaka dzekufanotaura. Makurukota eEcon ane nzwisiso yakawanda yezvinhu izvi- zviitiko zvisingafano fungidzike.
Sekutaura kwakaita Derek nezve Mapepanhau nezvimwe, ini ndakaverenga kumwe (mazita akatanhamara las) kurudyi :) iyo NGUVA inoburitsa nhanho ye6th-7th grade kuverenga pavanonyora nyaya dzavo kuti zviite nyore kuti vanhu vese vaverenge.
Mimwe yemashoko akanakisa andakaverenga pamablog akasiyana mitsara mipfupi ine zvirevo, ndinofunga Seth Godin ndiye tenzi weizvi.
Ndinoziva sei kuti saiti iri kushanda? Pane here blog inozivikanwa nekuverenga kwakaoma?
Ndofunga Nhema Swan inogona kuve yakakodzera kune vashambadziri nekuda kwekunzwisisa kwayo kwechokwadi njodzi yatiri kutarisana nayo mumusika wanhasi. Mune ino bhuku, iwe unodzidza zvakawanda nezve simba uye kutonga kupfuura chero kumwe kunhu. Simba uye kutonga zvinorwadza zvakashata - mushure mezvose, vashambadzi vari kugutsa vanhu mazuva ese uye aya maitiro maviri akanaka anonyengetedza? Ndofungidzira.
Kwete kuverenga kuri nyore hazvo asi zvaikurudzira izvi kune vanoita sarudzo dzemarudzi ese.